Implementing HR Development | Hintha Business Centres
You are here: Home / News / Implementing HR Development in Your Company
Implementing HR Development in Your Company
February 1, 2018 /in News /by hintabiz
Speaker: U Win Thu
Organiser: HR Professional Network (HRPN)
Registration required. Reserved number of seats for Hintha Clients. Free entry. Submit your interest at our Reception desk or email us frontdesk-sule@hinthabusinesscentres.com.
Does your company staff lack relevant skills to execute their work? Do they often resign because they are not learning enough? If you want to learn how to implement structured learning and development processes in your company, come and join us at the first inaugural HRPN event!
U Win Thu will share how you can implement HR Development processes in your company. He will explain how it can be done regardless of the size of your business. The topics will include:
How it can be applied to your company, whether you are SMEs or MNCs.
How this can help in your employee retention.
HR Professional Network (HRPN) isaplatform for HR professionals to gather, learn from each other and strengthen HR capabilities. HPRN will support this vision throughaseries of events and seminars.
U Win Thu, FCMI (CMI-UK), MBA (Heriot-Watt University), PG Dip BM (ABE-UK)
Principal, Co-founder and Executive Director of Inspiro Institute / Flagship Co., Ltd
U Win Thu is actively involved in teaching and academic administration of the UK MBA program at Inspiro Institute. He has trained and worked asaconsultant for many profit and non-profit organisations in the area of HR restructuring, project management, leadership & talent development, sales force management, social enterprise start-up, and more.
သင့်ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်းတွေမှာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် နည်းနေလို့ အားမလိုအားမရဖြစ်နေပါသလား။
ဒီလိုကျွမ်းကျင်မှုလျော့နည်းနေတဲ့တစ်ဖက်မှာ သူတို့ရဲ့ ခံစားခွင့်နဲ့ တိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်း တိုးတက်လာမှုမရှိတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းခွင်မှာ စိတ်ဝင်စားမှု၊စိတ်ကျေနပ်မှုနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေလစ်ဟင်းလာပြီး အလုပ်ထွက်ကြတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါသလား။ ဒီလို အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ဝန်ထမ်းတွေအတွက် learning and development process ကို စနစ်တကျချမှတ်ရေးဆွဲထားရပါတယ်။ သင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ HR Development အတွက် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်သင့်သလဲဆိုတာကို လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ တတ်သိပညာရှင်များကွန်ယက်(HRPN) မှ ကြီးမှူးကျင့်ပတဲ့ ပထမဆုံးဟောပြောပွဲမှာ လာရောက်နားဆင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ဆရာဦးဝင်သူက မည်သည့်ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားမှာမဆို လက်တွေ့အသုံးချအကောငိအထည်ဖော်နိုင်မယ့် HR Development ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ဟောပြောပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
– HR Development ဆိုတာဘာလဲ။
– HR Development ကို ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။
– ဒီနည်းနဲ့ သင့်ဝန်ထမ်းတွေကို ဘယ်လိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲ။
HR Professional Network (HRPN) သည် HR ပညာရပ်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းထားသော non-profit organization တစ်ခုဖြစ်သည်။ HRPN မှကျင်းပသော Event များတက်ရောက်ပြီး network ကျယ်ပြန့်လာမည့်အပြင် တတ်သိပညာရှင်များအချင်းချင်းတွေ့ဆုံ၍ အတွေ့အကြုံများ၊ ဗဟုသုတများဆွေးနွေးဖလှယ်ရင်း မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေကို မြင့်မားလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Principal, Co-founder and Executive Director of Inspiro Institute/ Flagship Co., Ltd
ဆရာဦးဝင်းသူဟာဆိုရင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံက တိုက်ရိုက်အပ်နှင်းသော UK MBA programကို သင်ကြားပေးနေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်း စီမံခနိ့ခွဲမှု ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်၊HR team ဖွဲ့စည်းခြင်း၊project management၊ social-entreprise များ ဖွဲ့စည်းခြင်းစတာတွေကို အကြံပေးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
စာရင်းပေးသွင်းရန် – here.
ပောာပြောပွဲသို့ တက်ရောက်ခွင့် ရသူများကို confirmation email ပေးပို့ပါမည်။
သငျ့ကုမ်ပဏီက ဝနျထမျးတှမှော လုပျငနျးကြှမျးကငျြမှုနဲ့ စှမျးဆောငျရညျ နညျးနလေို့ အားမလိုအားမရဖွဈနပေါသလား။
ဒီလိုကြှမျးကငျြမှုလြော့နညျးနတေဲ့တဈဖကျမှာ သူတို့ရဲ့ ခံစားခှငျ့နဲ့ တိုးတကျမှုအခှငျ့အလမျး တိုးတကျလာမှုမရှိတဲ့အတှကျ လုပျငနျးခှငျမှာ စိတျဝငျစားမှု၊စိတျကနြေပျမှုနဲ့ စိတျအားထကျသနျမှုတှလေဈဟငျးလာပွီး အလုပျထှကျကွတဲ့အဖွဈတှနေဲ့ကွုံတှနေ့ရေပါသလား။ ဒီလို အခကျအခဲတှကေို ကြျောဖွတျနိုငျဖို့ဆိုရငျ ဝနျထမျးတှအေတှကျ learning and development process ကို စနဈတကခြမြှတျရေးဆှဲထားရပါတယျ။ သငျ့ကုမ်ပဏီရဲ့ HR Development အတှကျ ဘယျလိုနညျးလမျးတှနေဲ့ လုပျဆောငျသငျ့သလဲဆိုတာကို လူ့စှမျးအားအရငျးအမွဈဆိုငျရာ တတျသိပညာရှငျမြားကှနျယကျ(HRPN) မှ ကွီးမှူးကငျြ့ပတဲ့ ပထမဆုံးဟောပွောပှဲမှာ လာရောကျနားဆငျပါရနျ ဖိတျချေါအပျပါတယျ။ ဒီပှဲမှာ ဆရာဦးဝငျသူက မညျသညျ့ကုမ်ပဏီအမြိုးအစားမှာမဆို လကျတှအေ့သုံးခအြကောငိအထညျဖျောနိုငျမယျ့ HR Development ဆိုငျရာ နညျးလမျးကောငျးတှကေို ဟောပွောပို့ခသြှားမှာဖွဈပါတယျ။
– HR Development ကို ဘယျလိုအသုံးခမြလဲ။
– ဒီနညျးနဲ့ သငျ့ဝနျထမျးတှကေို ဘယျလိုဆကျလကျထိနျးသိမျးနိုငျမလဲ။
HR Professional Network (HRPN) သညျ HR ပညာရပျကြှမျးကငျြသူမြားအတှကျ ရညျရှယျ၍ ဖှဲ့စညျးထားသော non-profit organization တဈခုဖွဈသညျ။ HRPN မှကငျြးပသော Event မြားတကျရောကျပွီး network ကယျြပွနျ့လာမညျ့အပွငျ တတျသိပညာရှငျမြားအခငျြးခငျြးတှဆေုံ့၍ အတှအေ့ကွုံမြား၊ ဗဟုသုတမြားဆှေးနှေးဖလှယျရငျး မိမိတို့ရဲ့ လုပျငနျးစှမျးဆောငျရညျတှကေို မွငျ့မားလာစမှောဖွဈပါတယျ။
ဆရာဦးဝငျးသူဟာဆိုရငျ အင်ျဂလနျနိုငျငံက တိုကျရိုကျအပျနှငျးသော UK MBA programကို သငျကွားပေးနသေူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စီးပှားရေးအဖှဲ့အစညျးမြားနဲ့ ပုဂ်ဂလိကအဖှဲ့အစညျးတှမှောလညျး စီမံခနိ့ခှဲမှု ခေါငျးဆောငျမှုစှမျးရညျ၊HR team ဖှဲ့စညျးခွငျး၊project management၊ social-entreprise မြား ဖှဲ့စညျးခွငျးစတာတှကေို အကွံပေးလကေ့ငျြ့သငျကွားပေးခွငျးမြားပွုလုပျလကျြရှိပါတယျ။
စာရငျးပေးသှငျးရနျ – here.
ပောာပွောပှဲသို့ တကျရောကျခှငျ့ ရသူမြားကို confirmation email ပေးပို့ပါမညျ။
Our Clients Talk: YangonBakehouse Community Breakfast, March 2018